သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ချုပ်အပ် -> စက်ကို အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်ကို အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: 621; 81X1, 82X1, MY1023A, SY1225
ဒါဟာသော့ခတ်စက်ကျော်နိမ့်ကျမြန်နှုန်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ အဝတ်တန်ဆာကိုအဘို့, knitted ကျီ။ T-ရှပ်အင်္ကျီအပေါ်အပ်ချုပ် hemming ကိုအောက်ခြေများအတွက်သင့်လျော်, အတွင်းခံအဝတ်အစား & အားကစားကျီနှင့်လက်ကိုင်ပဝါ, ဦးခေါင်းစားဆင်ယင် & ပိုး scarves နှင့်နောက်ကျော panties အပေါ် latching T-ရှပ်အင်္ကျီ; အပ်နဖားကိုအရွယ်အစား9# # 11 Size ကို 11 #, 14 # 16 #: ချုပ် hemming ရှပ်အင်္ကျီအဘို့အနိုင်ဝတ်စုံ, knitted ပိတ်ထည်ရေကူးဘောင်းဘီနှင့် twill ပိတ်ထည် (Jean ပိတ်ထည်) .Equivalent စနစ်များထည့်သွင်းကျီ: 621; 81X1, 82X1, MY1023A, SY1225 ။
Machine Needles | Nähmaschinennadeln Flachkolben | иглы шметц | Agulhas para Maquinas de Costura | Aghi per macchine | मशीन सुई | Agujas de Maquina de Coser | الإبر آلة | Máy Cây Kim | เข็มเครื่อง | Mesin Jarum | মেশিন ছুঁচলো | Makine İğneleri | ម្ជុល​ម៉ាស៊ីន | စက်ကို အပ်နဖားကို	|job search